ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်၏ နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဖြစ်သည့်အပြင်၊ သံတမန် နှင့် အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သူမသည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် လည်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်အာဏာအား သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် သူမအား တပ်မတော်မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
(1945-06-19) ၁၉ ဇွန်၊ ၁၉၄၅
St Hugh's College (အောက်စဖို့ဒ်)
၈၈ အရေးအခင်း ၊ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး
၁၉၉၀ ၊ ၂၀၁၂ ၊ ၂၀၁၅
သူမသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ရွပ်ဖ်တိုဆု နှင့် လွတ်လပ်စွာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအတွက် ပေးအပ်သော စက်ခါရော့ဗ်ဆု တို့ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သည့် စစ်အစိုးရ လက်အောက်တွင် အကြမ်းမဖက်ပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ တိုက်ပွဲဝင်မှုကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်၌ နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုလည်း ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကျော် ဖော့ဘ်စ် (Forbes)မဂ္ဂဇင်းမှ ရွေးချယ်သည့် ကမ္ဘာ့ဩဇာအရှိဆုံးအမျိုးသမီးများ ၁၀၀ စာရင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နံပါတ် ၁၉ တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
သူမသည် ၁၉၆၂ မှ ၁၉၆၃တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီတက္ကသိုလ် လေဒီရှယ်ရီရမ်ကောလိပ်၌ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်ကို ဆည်းပူးခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ မှ ၁၉၆၇တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်၏ ဟူ့စ်ကောလိပ်၌ ဒဿနဗေဒ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးပညာရပ်များကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့ပြီး၊ ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ခုနှစ်တွင် လန်ဒန်တက္ကသိုလ်အရှေ့တိုင်းနှင့် အာဖရိကလေ့လာရေးဌာန၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာန၌ သုတေသနလက်ထောက်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန် မိုက်ကယ်အဲရစ်အား တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုတော် ဘိလပ်ပြန်သန်း သည် မိဘများ၏ မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ပြီး၊ အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကျောင်းသူဘဝ တစ်လျောက်လုံးတွင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
ဘွဲ့ရပြီးနောက် ‘စု’ သည် လပိုင်းမျှ စာသင်ပို့ချခြင်းနှင့် သမိုင်းဆရာ ဟယူးတင်ကာ (Hugh Tinker) နှင့်အတူ သုတေသနလုပ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပြီးသောအခါ နယူးယောက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဒေါ်သန်းအေးနှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နယူးယောက်မြို့တွင် ဆက်လက်ပညာဆည်းပူးရန်ရောက်ရှိခဲ့သော်လည်း၊ ကုလသမဂ္ဂ၌ ဘဏ္ဏာရပ်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို သုံးနှစ်ကြာအောင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ လက်မထပ်ခင် ၈ လအတွင်း နယူးယောက်မှ ချစ်သူရှိသည့်နေရာ တိဗက်သို့ ပေးစာပေါင်း ၁၈၇ ခုတွင်လည်း၊ အကယ်၍ မိုက်ကယ် နှင့် လက်ထပ်ခဲ့လျှင်၊ မိမိသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလေးထားမှု လျှော့နည်းသွားနိုင်သည်ဟု မိသားစု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ အထင်မှားခြင်းကို စိုးရိမ်မိကြောင်း အသိပေးခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်သားများမှ သူ့ကိုလိုအပ်လာပါကလည်း၊ မိုက်ကယ်မှ သူ့အား အကူအညီဝိုင်းဝန်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအား လက်ထပ်ထားခြင်းကြောင့်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား လျှောက်ထားခွင့်ရှိသော်လည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံသားခံယူခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၊ သူမသည် သံတမန်အရာရှိများ ကိုင်ဆောင်သော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ထိုအချိန်တွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
ပုံမှန်အစဉ်အလာအရ သူမသည် ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးကို ဆက်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရသည် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များအား အတည်မပြုဘဲ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ၏ ရှုတ်ချခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေချိန်အတွင်း၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ နှင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီမှ စက်ခါရော့ဗ်ဆုကိုအပ်နှင်းခဲသည်။ ၊၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကြီးကို ရရှိခဲ့သော်လည်း၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေခြင်းကြောင့် လူကိုယ်တိုင် ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ၊ ခင်ပွန်းသည် နှင့် သားနှစ်ဦးဖြစ်သည့် အလက်ဇန္ဒားနှင့် ကင်မ်တို့က ကိုယ်စားတက်ရောက်ယူခဲ့ကြသည်။ နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု၏ ဆုငွေဒေါ်လာ ၁.၃ သန်း၏ ငွေကြေးအားလုံးကို မြန်မာပြည် ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးများအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ရန်ပုံငွေအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇွန် ၉ ရက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြင်းထန်သည့် ဝမ်းလျှောရောဂါနှင့် အားလျော့ပြီး ဆေးရုံတင်ထားခြင်း ခံရကြောင်း အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ၏ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်မှ သတင်းပေးပို့ခဲ့သည်။ ၎င်းကြေငြာချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ရီမှ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် လက်ထောက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဂန်ဘာရီသည် လူ့အခွင့်အရေးကို ကျယ်ပြန့်စွာ လိုက်နာစေလိုသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လေးရက်ကြာခရီးဆန့်ခဲ့ရာမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဂန်ဘာရီ၏ အဆိုအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရှိရပြီး သူမ၏ဆန္ဒမှာ မိသားစုဆရာဝန်နှင့် ပိုမို၍ ပုံမှန်ပြသလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များသို့ အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး၊ စစ်အစိုးရသည် ထောင်သား ၂၈၃၁ ယောက်ကို လွှတ်ပေးခဲ့ရာတွင်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၄၀ ပါဝင်သည်။၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူမ၏ နိုဘဲလ်လ်ဆုကြေးငွေများကို အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ ပြည်ပတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု၍ အစိုးရပိုင် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှ စွပ်စွဲလိုက်သည်။ ထိုစွပ်စွဲမှုသည် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ထောက်ပံ့ကျင်းပနေသည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်နေသည် ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင်၊ ဒေါ်စုသည် အကျဉ်းထောင်တွင် နေရသော ကာလသည် ၁၂ နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားကြသော အဖွဲ့အစည်းများမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အခြားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်မြောက်ပေးရန် မြို့ကြီး ၁၂ ခုတွင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်စု နှင့် စကားပြောဆိုနိုင်ရန် ကြားခံဆက်သွယ်ရေး ပုဂ္ဂိလ်အဖြစ် ဝန်ကြီးအောင်ကြည် ကိုခန့်ခဲ့ပြီး၊ သူသည် စစ်အစိုးရ၏ အာဏာအုပ်စိုးထားသည့် လူကြီးပိုင်းများထဲမှဖြစ်ပြီး၊ စစ်အစိုးရ၏ ရာထူးနံပါတ်စဉ်တွင် အမည်လျာခံထားရသူလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်စုကြည်သည် ၃ နှစ် အတွင်း ပထမဦးဆုံး သူမ၏ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများ နှင့် အစိုးရ ဝန်ကြီးများအကြား တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီ ဒုတိယအကြိမ် ခရီးအဆုံးနောက်၊ နာရီပိုင်းအကြာတွင် အာဏာပိုင်အစိုးရတို့သည် တီဗီ နှင့် ရေဒီယိုများတွင် ထိုတွေ့ဆုံခဲ့မှုကို တရားဝင် ထုတ်ဖော်ကြေငြာခဲ့သည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရန် ဖိတ်ကြားမှုများသည် မှန်ကန်သည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
စစ်အစိုးရသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၊ ပြည်သူများ အရေးပေါ်ကူညီမှု လိုအပ်နေချိန်အတွင်း စီစဉ်ထားခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲကို မရပ်ဆိုင်းပဲ၊ ၂၀၁၀ တွင် ဆက်လက်ကျင်းပခဲသည်။ ထိုရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာ အဆင့် အတန်းနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိခြင်း၊ တရား မျှတမှုမရှိဟု ပြောဆိုခဲ့သူများတွင် ဥရောပ သမဂ္ဂ၊ ဩစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကယ်ဗင်ရဒ် တို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားမှ အိန္ဒိယအစိုးရ အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ထုတ်ဖော် ပြောဆိုမှုမရှိခဲ့ခြင်းကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည်။အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတမှု ရှိမရှိအပေါ် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း၊ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ သမ္မတ Benigno Aquino မှ ရွေးကောက်ပွဲသို့ မဲလာပေးသူ နည်းနေခြင်းသည် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါဝင်ခွင့် မပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး သူ့ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တရုတ် နိုင်ငံ မီဒီယာများတွင် ထိုရွေးကောက်ပွဲသတင်းကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ဝေဖန်မှုများမရှိခဲ့ချေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD) သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည့်သူ့လွှတ်တော်၌ ၂၅၈ နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၌ ၁၃၈ နေရာ နှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးတို့၏ လွတ်တော်များ၌ ၅၀၁ နေရာအထိ တောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်(အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်း) တွင် ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း၏ ၈၃.၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိအနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်NLD ပါတီသည် အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရှိအမတ်ဦးရေ ၃၂၂ ဦးထက် သာလွန်သော အမတ်ဦးရေ ရရှိသည့်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် အစိုးရဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၂၁ ရက်နေ့တွင် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်၏ အမှတ် ၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်း နေအိမ်၌ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း နှင့် တွေ့ဆုံကာ ပူးတွဲသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် ဗြိတိသျှပါလီမန် နှစ်ရပ်စလုံး၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားရန် Westminster ပါလီမန် ခန်းမကြီးထဲ၌ ပုံမှန်အားဖြင့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုသာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခွင့်ရှိသော်လည်း၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတ မဟုတ်သေးသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ပထမဦးဆုံး အထူး ဂုဏ်ပြုသည့်အနေနှင့် ထိုခန်းမကြီး၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားခွင့် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဂုဏ်ထူးဆောင်ခန်းမကြီးတွင် မိန့်ခွန်းပြောခွင့်ရသူများတွင် ချားလ်စ်ဒီဂေါ၊ နဲလ်ဆန်မန်ဒဲလား၊ ၁၆ကြိမ်မြောက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး နှင့် ဘာရက် အိုဘားမားတို့ ဖြစ်ကြသည်။ဒေါ်စုသည် ပထမဦးဆုံး အာရှနိုင်ငံသား နှင့် ၊ ပြည်ပမှ ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီး၊ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မဟုတ်သေးသူတစ်ယောက်ကို ဤနေရာ၌ ဂုဏ်ပြုမိန့်ခွန်းပြောကြားခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဂျွန်ဘာကောင်း မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြာခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၂၂ရက်နေ့တွင် ဗြိတိန်ရောက် မြန်မာများနှင့်လည်း လန်ဒန်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် သူမ၏အမေရိကန်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကို စတင်လိုက်ပြီး ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ နယူးယောက်၊ ဖို့ဝိန်း၊ လူးဝစ်ဗီးလ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနှင့် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ကြီးများသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၌ ချီးမြှင့်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်သည့် ကွန်ဂရက်ရွှေတံဆိပ် ဆု၊ Atlantic Council မှပေးအပ်သည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသားဆု၊ Asia Society မှပေးအပ်သည့် Global Vission ဆု၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို တက္ကသိုလ်ကပေးအပ်သည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့နှင့် National Endowment For Democracy (NED) မှ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်ကတည်းက ပေးအပ်ထားသည့် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ဆယ်နှစ်ပြည့် ဂုဏ်ပြုရုပ်ထုကို ကိုယ်တိုင်လက်ခံရယူခဲ့သည်။ ထိုခရီးစဉ်တွင် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားနှင့် အိမ်ဖြူတော်တွင်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကိုလည်း နယူးယောက်မြို့၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ကုလသမဂ္ဂ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေညီလာခံခရီးစဉ်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေခြင်း၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ကုလသမဂ္ဂမိန့်ခွန်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခြင်း၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တည်းခိုရာသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ပိတ်ဆို့မှုများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကွန်ဂရက်ရွှေတံဆိပ်ဆု လက်ခံရယူပွဲတွင် မြန်မာအစိုးရဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတက်ရောက်ခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာများ တွေ့ဆုံခြင်း၊ သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်းများပြောကြားခြင်း စသည့် အပြုသဘောဆောင်သော ဖြစ်ရပ်များနှင့် ပြည့်နှက်နေခဲ့သည်။
၁ ၁၉၉၀ သိုးရော်ဖ် ရွပ်ဖ်တို ဆု ရဖ်တို လူ့အခွင့်အရေး ဖောင်ဒေးရှင်း နော်ဝေ
၃ ၁၉၉၁ နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု နိုဘဲလ် ကော်မတီ နော်ဝေ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ဆွီဒင် ခရုံနာ
၃ ၁၉၉၆ Companion of the Order of Australia ဩစတြေးလျ
၆ ၂၀၀၂ A Doctor of Laws honoris causa Memorial University of Newfoundland ကနေဒါ
၇ ၂၀၀၄ ဂွမ်ဂျူး လူ့အခွင့်အရေးဆု (Gwangju Prize for Human Rights) တောင်ကိုရီးယား
၈ ၂၀၀၇ Honorary Canadian citizenship ကနေဒါ
၉ ၂၀၀၇ အိုလွတ်ဖ် ပါလ်မယ် ဆု (Olof Palme Prize) အိုလွတ်ဖ် ပါလ်မယ် မိသားစု နှင့် ဆွီဒင်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ထူထောင်မှု ဆွီဒင် ၇၅ ၀၀၀ အမေရိကန် ဒေါ်လာ
၁၀ ၂၀၀၈ ကွန်ဂရက် ရွှေတံဆိပ်ဆု Congressional Gold Medal)  United States Congress အမေရိကန်
အောင်ဆန်းစုကြည် ကမ္ဘာ့လွတ်မြောက်ရေး ရန်ပုံငွေ- အမည်ပေးထားသည့် ရန်ပုံငွေကို နော်ဝေအခြေစိုက် အစိုးရမဟုတ်သည့် Partnership For Change အဖွဲ့၊ နော်ဝေ မီဒီယာအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် HippieMedia ၊ နော်ဝေဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ ဘိုနဗစ်နှင့် နော်ဝေရောက် မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းတို့ ပါဝင်ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးနောက် ဒေါ်စုမှ လက်မှတ်ထိုး အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့၌ အော်စလိုမြို့တွင် ရန်ပုံငွေအမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ သန်းနှင့် စတင် မတည်ခဲ့သည်။
"Myanmar election commission announces NLD wins overwhelmingly in by-elections"၊2April 2012။2April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
7 Day Daily Newspaper ဆောင်းပါး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနိုင်ရ၊ အန်အယ်လ်ဒီ အများစုနိုင်ရန် မျှော်လင့်
Forbes ၏ ဩဇာကြီးသူစာရင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်
Aung San Suu Kyi – Biography. Nobel Prize Foundation.
Myanmar Family Roles and Social Relationships။ Government of Myanmar။ 26 October 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 September 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Min Lwin။ "Suu Kyi Protester Arrested"၊ The Irrawaddy၊ 28 May 2009။7August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို "အမေစု"ဟု အော်ဟစ် နှုတ်ဆက်" (in Burmese)၊ ဧရာဝတီ၊ 13 November 2010။7August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"City honours democracy campaigner"၊ BBC၊4March 2009။7July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Beech၊ Hannah။ "The Lady Walks Free Again"၊ Time (magazine)၊ 29 November 2010။
Moe, Wait (3 August 2009). Suu Kyi Questions Burma’s Judiciary, Constitution. The Irrawaddy.
&feature=related Aung San Suu Kyi interview (video). YouTube.
Buncombe, Andrew (5 July 2009). 5,000 days in captivity: The world's most famous political prisoner andadismal landmark. The Independent.
A non-political educational charity dedicated to supporting the education of exiled Burmese students။ Prospect Burma။ 2014-02-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Suu Kyi rejects UK visit offer. BBC News. 26 March 1999.
"Obituary: A courageous and patient man"၊ London: BBC News၊ 27 March 1999။4July 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Burma expels Italian reporter for "illegal reporting, TV Myanmar, Rangoon, 18 August 1998.
Despite the lack of an official death toll for the Depayin Massacre, Burmese dissidents claim around 70 people perished in the attack.
Yahoo News on Buddhist monk uprising. Associated Press. Archived 18 August 2013 at the Wayback Machine.
Democracy icon Aung San Suu Kyi greets Myanmar monks. AFP. 22 September 2007 Archived 29 October 2013 at the Wayback Machine.
Inside Burma's Insein jail. BBC News Online. 14 May 2009
Security tight amid speculation Suu Kyi jailed. The Australian. 28 September 2007
Burmese Junta silences the monks. TIME. 28 September 2007
UN envoy sees top Burma dissident, BBC News Online, 30 September 2007
UN envoy holds key Burmese talks. BBC News Online.2October 2007
McDonald, Mark (7 May 2009). U.S. Man Held After Swim to Burmese Nobel Peace Laureate’s Home. The New York Times.
မော်မန်ဂိုဏ်း - ဝိကိပိဒိယ (in (မြန်မာ))။ My.wikipedia.org။ 2014-02-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Suu Kyi trespasser incidents - Wikipedia, the free encyclopedia။ En.wikipedia.org။ 2014-02-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
James, Randy (20 May 2009). John Yettaw: Suu Kyi's Unwelcome Visitor. TIME.
Kennedy, Maev (14 May 2009). Lake swimmer could cost Suu Kyi her freedom. The Guardian.
Burma opposition leader on trial, Financial Times, 19 May 2009
Burma's Aung San Suu Kyi on trial, BBC News Online, 18 May 2009
Suu Kyi 'composed' at Burma trial, BBC News Online, 20 May 2009
Lawyers for Aung San Suu Kyi protest innocence as trial begins, The Times, 18 May 2009
Myanmar Court Charges Suu Kyi, Wall Street Journal, 22 May 2009
Court Rejects Two Suu Kyi Defense Witnesses။ Irrawaddy.org (9 June 2009)။ 10 June 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Myanmar Aung San Suu Kuy to be put under detention — Asia News။ Asianews.it (14 February 2006)။ 10 June 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Suu Kyi's witnesses 'rejected', BBC News Online, 28 May 2009
Myanmar says American main culprit in Suu Kyi case. AP. 25 June 2009 Archived3July 2009 at the Wayback Machine.
Aung San Suu Kyi celebrates 64th birthday with jail guards. The Guardian. 19 June 2009
UN calls for release of Suu Kyi, The Age, 24 May 2009
Western outcry over Suu Kyi case, BBC News Online, 18 May 2009
SAfrica urges immediate Aung San Suu Kyi release Archived 1 October 2011 at the Wayback Machine., AFP at IC Publications, 22 May 2009
Asian leaders call for release of Aung San Suu Kyi, Radio Australia, 15 May 2009
Asian leaders condemn Burma trial, BBC News Online, 19 May 2009
Myanmar protests ASEAN alternate chairman statement on Aung San Suu Kyi, Xinhua, 24 May 2009
Free Burma's Political Prisoners Now! Campaign.
Horn, Robert (5 July 2009). Ban Ki-Moon Leaves Burma Disappointed. TIME.
Obama appeals to Myanmar junta to release Aung San Suu Kyi. The Times of India. 18 August 2009.
Obama to appeal on Suu Kyi။ The Straits Times (10 November 2009)။ 30 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Associated Press။ "Burmese court rejects appeal against Aung San Suu Kyi house arrest"၊ The Guardian၊2October 2009။ 30 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 October 2010။
Nakashima, Ellen (13 October 2003). Burma's Iron 'Aunty'. The Washington Post.
UN: Suu Kyi detention 'illegal'. Al Jazeera. 16 May 2009
"Burma releases pro-democracy leader Aung San Suu Kyi"၊ BBC News၊ 13 November 2010။ 14 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 November 2010။
Daw Suu Watch - Detention - ALTSEAN Burma။ Altsean.org (2009-11-27)။ 19 July 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-02-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Burma law formally bars Aung San Suu Kyi from election"၊ BBC News၊ March 10, 2010။
"Burma announces elections ? but not for Aung San Suu Kyi"၊ The Daily Telegraph၊4January 2010။ 25 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kim Ghattas (2011-12-02)။ BBC News - Hillary Clinton Burma visit: Suu Kyi hopeful on reforms။ Bbc.co.uk။ 2014-02-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Overzicht Eredoctoraten Vrije Universiteit Brussel (in Dutch)။ Vrije Universiteit Brussel။4July 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Arrest Yourself"၊ US Campaign for Burma။4July 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 July 2006။
"St. Hugh's Full Moon Ball"၊ The Burma Campaign UK။4July 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
For example, no one from her office contacted the Thai Foreign Ministry, which normally coordinates such high-profile visits. “As far as I know, we have not been approached by her team,” Mr. Thani saidafew hours before she was to land. U Nay Zin Latt, an adviser to Mr. Thein Sein, said the president could not make time to go.“He is extremely busy with his work, and taking great care of transitioning and transformation,” Mr. Nay Zin Latt said in an e-mail. Thai officials said the president’s visit had been rescheduled for next week.
MLA style: "Aung San Suu Kyi - Nobel Diploma". Nobelprize.org.13 Oct 2012 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-diploma.html.
BBC Burmese - မြန်မာ့ရေးရာ - အောက်စဖို့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဘွဲ့ ဒေါ်စု လက်ခံရယူ။ Bbc.co.uk (1970-01-01)။ 2014-02-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
BBC Burmese - နိုင်ငံတကာ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါရီမြို့ကို ရောက်ပြီ။ Bbc.co.uk (1970-01-01)။ 2014-02-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဒီလှိုင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၃၈)၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမေရိကန်ခရီးစဉ် မှ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းနဲ့ နယူးယောက်မြို့မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
The Lady (2011)။ IMDb.com။ 2015-11-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Damien Rice - Unplayed Piano (Official Video)။ YouTube (2010-11-24)။ 2014-02-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Office of the Clerk of the U.S. House of Representatives - 404။ Clerk.house.gov။ 2014-02-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နာမည်နှင့် ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့တစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့ (ဘီဘီစီ)
How Prospect Burma Began။ Prospect Burma။9March 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-02-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။